Sheekh C/raxmaan Sudeys oo Amar Soo Saaray ee Meeshii Nabiga CSW istaagi Jiray oo... | Allbanaadir News	Sheekh C/raxmaan Sudeys oo Amar Soo Saaray ee Meeshii Nabiga CSW istaagi Jiray oo...
Sheekh C/raxmaan Sudeys oo Amar Soo Saaray ee Meeshii Nabiga CSW istaagi Jiray oo…
Imaamyada masaajidka Rasuulka ee magaalada Madiina al-Munawarah ayaa dib ugu laabtay mixraabkii Rasuulku uu salaadaha ku oogi jiray ee ku yaalla gudaha Rowdada sharafta badan.
Jariidada “Okaz” ee kasoo baxda gudaha dalka Sucuudiga ayaa qortay in madaxa guud ee arrimaha Xaramka Makka iyo Madiina Sh. Cabdiraxmaan al-Sudeys inuu yiri: “Imaamyada masaajidka Nabiga ee sharafta badan waxay dadka ka tujin doonaan saaladda “Mixraabka Rasuulka SCW ee gudaha al-Rowda al-Shariif, laga bilaabo salaadda Jimacaha” ee December 8, 2017 oo ku beegnayd Jimcihii lasoo dhaafay.
Arrinta keentay in markii hore mixraabkan salaadda laga wareejiyo ayaa ah baqdin laga qabay iney dadku si aad ah ugu qulqulaan marka ay booqanayaan qabriga Rasuulka SCW iyo labadiisii saaxiib ee Abu-Bakar iyo Cumar.
Waxaa xusid mudan, in Mixraabka Rasuulka SCW uu ku yaallo gudaha Al-Rowdah Al-Shariifah, dhanka bari waxaa ka xiga Qabirga Rasuulka SCW, dhankiisa Galbeedna waxaa ku yaalla Minbarkii uu Nabigu Khudbadaha ka akhrin jiray.
Inta aan hadda mar kale lagu soo noqon Mixraabkan waxaa salaadaha lagu oogayay mixraabka sayid Cusmaan oo uu dhisay khaliifkii Islaamaka ee Cusmaan Binu Cafaan RC, kadib markii uu ballaarin ku sameeyay masaajidka Rasuulka, sidaas ayaana loogu magac daray mixraabkii Sayid Cusmaan RC.